Ahoana ny fiofanana amin'ny retriever volamena | Tontolo alika
Ahoana ny fomba fampiofanana retriever volamena
Ny Golden Retriever dia iray amin'ireo karazana canine tsara indrindra any: fitiavana, sariaka, manam-paharetana amin'ny zanaka, manan-tsaina ... Volo izay hankafizin'ny fianakaviana rehetra, satria tiany ny mianatra zava-baovao, raha mbola misy ny olombelona. Andao raiso amina lalao 😉.
Raha te hankafy amin'ny fahafinaretana tanteraka ny fiainana isika dia tsy misy toa ny mahafinaritra ny mpiara-miasa aminy. Fa, Hainao ve ny mampiofana retriever volamena?
1 Teknika fanofanana mba hisarika ny sain'ny Golden retriever anao
2 Zavatra tokony ho fantatra alohan'ny hampiofanana alika
3 Ahoana ny fiofanana Golden Retriever?
4 Baiko alika hafa mandroso kokoa
5 Mampianatra fahazarana madiodio
6 Fanovana fitondran-tena Golden Retriever
Teknika fanofanana mba hisarika ny sain'ny Golden retriever anao
Mampiasà teny iray manokana rehefa mifantoka amin'ny fampianarana zavatra ny alikao ianao ary rehefa mihaino anao ny alikanao, mankanesa eo aminy ary omeo valisoa izy miaraka amina teny na andianteny manamafy toy ny "alika tsara, tena tsara na tsara."
Rehefa lasa minitra vitsy dia avereno io hetsika io ihany, fa izao kosa miaraka amin'ny valisoa izay homenao azy eny an-tananao ary mitazona halavirana 30 cm amin'ny biby fiompinao. Asehoy azy ny loka raha milaza ny teny hisarika ny sainy ianao ary ho tonga aminao sy ho anao izany. Omeo azy izao ny loka azonao amin'ny fihainoana.
Amin'ny fotoana fahatelo anaovanao azy, dia hijanona lavitra lavitra ny alika ianao, ka tsy maintsy manatona anao izy ary rehefa omenao ny loka azony ianao dia tsarovy ny miarahaba azy noho ny fankatoavany.
Amin'ireto dingana tsotra ireto dia hisarika ny sain'ny bibyo ianao ary ankehitriny dia afaka mampianatra azy fika hafa ianao, satria Ho fantatr'izy ireo fa rehefa avy mihaino dia misy valisoa izay azony raisina avy aminao.
Tadidio fa zava-dehibe ny itahirizanao teny tokana mba hisarihana ny sain'izy ireo ary mety ho "fifantohana" na "mihaino", na teny hafa izay ahitanao fa mahazo aina ianao ary tsy azo afangaro amin'ny baiko hafa.
Zavatra tokony ho fantatra alohan'ny hampiofanana alika
Mba hampiofanana alika, na inona na inona karazany (na lakroa), dia ilaina ny manisy fiheverana ireto manaraka ireto:
Ny teny mitovy dia tsy maintsy ampiasaina isaky ny filaharana. Ohatra, raha tiantsika hipetraka izy dia hiteny hoe "mipetrapetraka" na "mipetrapetraka" isaky ny misy isika fa mitovy foana.
Aza atao tononina aloha ny anarana dia avy eo ny baiko. Ny anarany dia teny iray izay haverintsika be dia be mandritra ny androm-piainany, noho izany dia tsy maintsy manana heviny tsy miandany ho azy izy io. Noho izany, raha tokony hiteny ianao hoe "Kira, avia", dia tsara kokoa ny miteny hoe "Avia, ry Kira".
Tsy maintsy raisinao ho lalao izany. Mila mahafinaritra ny mianatra. Noho izany dia ilaina ny manana faharetana be amin'ilay alika, ary manome valisoa maro azy isaky ny manao zavatra tiantsika izy.
Aza mampijaly azy, na mikiakiaka aminy, na manao zavatra mety hanimba azy. Raha nanana andro ratsy isika dia tsy hampiofana azy fa hilalao fotsiny.
Ahoana ny fiofanana Golden Retriever?
Miaraka amin'ny faharetana, fikirizana ary fanajana. Ny alika dia tsy robot, noho izany dia mila averimberin'izy ireo imbetsaka ilay zavatra hianarana azy. Ireo fivoriana dia tokony ho fohy, tsy mihoatra ny 5-10 minitra, raha tsy izany dia hankaleo eo noho eo, indrindra raha alika kely io.
Ny sasany amin'ireo baiko tokony hianaranao dia:
Ven: Ity dia baiko tsotra iray izay hianaranao haingana, azo antoka. Mila mijanona metatra vitsivitsy miala azy ianao, ary miteny hoe 'Avia' rehefa mampiseho azy fitsaboana ohatra.
Mipetraha na mipetraka: Azonao atao ny manomboka manome tsiro ny Golden Retriever anao isaky ny hitanao fa hipetraka izy io, ary amin'ny fitenenana hoe, alohan'ny hidirany amin'ny tany dia "mipetraha". Araka izany, rehefa averinao bebe kokoa izany, tsy ho ela dia ho afaka hangataka azy hipetraka ianao.
Na izany aza, raha tianao ny mampianatra azy ny baiko amin'ny fomba hafa, mihazakazaha mitsabo ny lohany sy eo an-damosiny, ary apetraho amin'ny tànanao malalaka ny tsindry sasany amin'ny lamosiny. Alohan'ny hipetrahany dia lazao aminy hoe "mipetraha."
Na izany aza:Sarotra ve ny hijanonan'ny retriever volamena? Tsy dia be loatra. Amin'ny fotoana fohy, izay misy dingana vitsivitsy avy eo aminao, araraoty ary lazao hoe "Mangina". Tano eo mandritra ny segondra vitsy, ary avy eo miteny hoe "Avia." Raha vantany vao eo anilanao izy dia omeo sakafo.
Afaka mandroso tsikelikely hatrany ianao.
Mandehana ankilabao:pMampandeha ny alika hiaraka aminao azonao atao ny mampiasa ny iray amin'ireo baiko baiko ireo: "Fuss, along or side", manondro ny torolàlana tokony harahiny.
Mandry: enyRaha tianao ny amboa mandry na mijanona mitoetra eo amin'ny toerana iray, dia mila miteny ianao hoe "midina, platz na tumba", ary tondroy ny toerana tokony hijanonanao.
Miantona: vs.akoho tianao ny alika hiarina amin'ny misy azy, mila manondro ny "tongotra" ianao, ka mijoro amin'ny toerana misy azy.
Mitondra: enyRaha tiantsika hihanika rindrina na hitsambikina fefy ilay alika, ny baiko tokony horaisiny dia “mitsambikina, miakatra na mitsambikina".
adelante:pMba handrosoan'ny alika dia mila manondro "voraus" fotsiny ianao ary miaraka amin'ity torolalana ity dia ho fantany.
fikarohana: naIray amin'ireo torolàlana fototra amin'ny fampiofanana ny "toy izany na karoka”, Ampiasaina amin'ny alika mba hanomboka hanaraka sy hahazo zavatra.
famotsorana: enyRaha misy zavatra tianao alefany ny alika dia mila miteny aminy ianao hoe "mbola, avelao handeha na omeo", mba hahafahan'ny alika mamerina ilay zavatra nalainy, fa "miala ary avelao handeha", Izy ireo koa dia mifandray amin'ny biby mamarana ny fanafihana.
Mangìna: vs.akoho alika miraoka ary tianao hangina izy, mila milaza fotsiny ny torolalana “mangina na manginaT ".
Hazo:pFa raha tianao hipoaka izy, ny torolalana holazaina aminy dia ny "hodi-kazo".
No: vs.Ho baiko hanasaziana ny alika, ny mampiasa "pfui, tsia na ratsy" ny mpampiofana, hanondroana fa tsy mety ny fihetsikao.
Tsara pFa mba hiarahabana azy amin'ny fitondran-tena tsara dia afaka mampiasa "tsara" ianao.
Baiko alika hafa mandroso kokoa
Raha vantany vao nahalala ny alikao ny baiko fototra amin'ny fampiofanana anao, azonao atao ny mandeha amin'ny ambaratonga manaraka amin'ny fampiofanana ary ahafahanao manome baiko lavitra nefa tsy misy fehy mifatotra.
Any amin'ny lavitra:pAfaka manondro ny iray amin'ireo baiko fototra ianao nefa tsy eo akaikin'ny alika, toy ny mipetraha, avia na mandry.
fikarohana: Le azonao atao ny mangataka ny alikanao hitady zavatra sasany ary hitondra azy aminao.
Ny fandavana sakafo:en ity tondro azonao atao ny mampianatra ny alikanao handà ny sakafo eny an-dalambe izany dia hita mandritra ny dianao, ka hanakana anao tsy harary.
Amin'ny ankapobeny, amin'ny ambaratonga avo lenta amin'ny fampiofanana ny alika dia hifantoka hamafiso ny fifandraisana misy eo aminao sy izy, satria ny baiko rehetra dia ho tanterahina nefa tsy mila eo anilanao na hihazona azy amin'ny fehy.
Mampianatra fahazarana madiodio
Alika manan-tsaina ny retrievers volamena, noho izany ny fianarana zavatra ho azy ireo dia tsy ho sarotra be. Ny fampianarana azy ireo amin'ny fidiovana, toy ny fanamaivanana ny tenany, dia mitaky anao hisafidy toerana manokana anaovan'ny biby azy ireo, ary ianao koa dia tsy maintsy misafidy ivelan'ny trano izay hisy.
Raha ao anatin'ny trano ilay tranokala, ny safidy tsara indrindra tokony hampiofanana azy amin'ny gazety amin'ny toerana nofidinao ho azy; raha tsy lavitra ny trano izany, ny faritra tena atoro azy ireo dia beton, tany na ahitra.
Ny zavatra mahomby indrindra mba tsy hanakorontanana eraky ny trano dia toerana tokana anazaran-tsainao ny Volamena, satria raha miova ianao, mety nandefa hafatra diso taminy ianao ary tsy maintsy ataonao anaty ny torolalana voalaza.
Mila toerana tsy dia lehibe loatra ianao mba hahafahan'ny alikanao manala ny tenany sy amin'ny lafiny mifanohitra, apetraho ny fandrian'ny alika kely mba hahafahany matory milamina.
Ambonin'izany rehetra izany dia mila manamaivana ny tenany matetika ireo alika kely amin'ity karazany ity, koa raha mitondra azy mitsangatsangana ianao, tokony hataonao farafahakeliny isan'ora sy sasany. Rehefa mandeha ny fotoana dia azonao atao tsy dia matetika loatra izany.
Zava-dehibe ny anaovanao a fanamafisana tsara miaraka amin'ny biby fiompinao rehefa mampianatra azy handeha ho any amin'ny trano fidiovana ianao, izay azonao atao amin'ny alàlan'ny fiarahabana sy fitsaboana, mba ho azonao antoka fa takany fa mampifaly anao io fihetsika io.
Fanovana fitondran-tena Golden Retriever
Rehefa Golden Retrievers amin'ny ankapobeny tsy mahazo fiofanana tsara mandritra ny volana vitsivitsy voalohany amin'ny fiainany, mirona hanana fihetsika tsy mendrika ho an'ity karazana biby fiompy ity, ka takian'izy ireo ny fanovana azy ireo.
Ary na dia asa tsy mila ataon'ny matihanina aza ity. Na izany aza, tokony hoheverinao fa ny fanovana ny fihetsiky ny alika dia tsy ho azo atao foana izany, indrindra raha miorim-paka lalina ao izy ireo.
Ny fihetsika tsy maintsy ovaina dia mifandraika amin'ny fihetsik'izy ireo ary ireo izay tsy mamela ny Golden na ny tompony hanana fomba mahazatra isan'andro.
Ny sasany amin'ireo olana amin'ny fitondran-tena ireo izay mila ovaina dia:
Araka ny efa nambarantsika, ireo fihetsika ireo dia mety azo ovaina na tsia, indrindra raha ny Retriever volamena Niharan'ny herisetra izy, satria ho sarotra aminy ny hatoky olon-kafa ary na i Golden hafa aza.
Ny hamafin'ny Golden mety noho ny tahotra bebe kokoa noho ny mahery setra toa izany, noho izany dia ilaina ny manao diagnostika marina momba ny antony fitondran-tenany, zavatra iray izay tsy azo faritana afa-tsy amin'ny mpitsabo biby.
Ho fanovana ny fitondran-tena dia tokony ho laharam-pahamehana ny fiompiana alika satria raha tsy izany dia tsy hamaly tsara ireo torolalana omenao azy izany.
Anisan'ny fanovana fitondran-tena toy izany, mila mampiasa fanamafisana tsara ianao, satria ity dia fitaovana tsara indrindra mamela anao hanome valisoa ny fitondran-tena tsara alika ary amin'izany ianao dia hamorona fatorana mifandraika aminy ary mety hanova ireo izay tsy nety tamin'ny fitondran-tenany.
Ohatra tsotra amin'izany ny alika mitsako ny kirarin'ny tompony. Raha te hanova io fahazarana io isika tokony hanome valisoa azy isika rehefaAleo izy mampiasa ny kilalaony mitsako fa tsy ny kirarony.
Toy izany koa no azontsika atao rehefa mifanerasera amin'ny alika hafa izy, satria amin'izany no hahafantarany fa tsara io fihetsika io.
Mba hahatratrarana ireo voalaza etsy ambony, tsy maintsy mampiasa mari-pahaizana klasika ianao, karazam-pianarana iray izay tsy maintsy ampiasanao stimulus tsy miandany izay afaka maneho valiny mandeha ho azy ao amin'ny alika, rehefa avy namerina imbetsaka ny stimulus condisioner ianao. Rehefa nahatratra azy ianao, io stimulus io izao no ho ilay stimulus mifehy.
Amin'izany fomba izany, azonao atao ny manova ny fihetsiky ny Volanao, mifehy ny fanentanana voarainy ary zavatra be mpampiasa amin'ny fiofanana alika hamahana ny olan'ny kompartista.
Amin'izay rehetra voalaza ato amin'ity lahatsoratra ity, Azo antoka fa ho afaka hampiofana tsara ny Retriever volamena ary ankafizo tsara ny miaraka amin'ity orinasa ity, ary azo antoka fa hanao ny anao koa izy. Tadidio fa miaraka amina alika tena mahay ianao izao izay tsy ho sarotra ny hanome fitiavana sy fanamoriana be dia be, fa mila mifehy koa ianao rehefa ilaina izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ahoana ny fomba fampiofanana retriever volamena